​Maamullada Soomaaliya oo is-kaashi samasytay [War-murtiyeed]
Hogaamiyaasha maamullada kala ah; Puntland, Galmudug, HirShabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa mudadii uu kulanku socday ka doodayay, xiriirka dowlad goboleedyada, amniga, siyaasadda, federaalaynta iyo dib u heshiisiinta.
War-murtiyeedkan ayaa lagu muujiyay sida uu baahiyay [Garowe Online] in maamullada dalka Soomaaliya ay samaysteen gole sannad kasta loo dooranayo Guddoomiye iyo ku-xigeen, waxaana Kalkan laga dhigay Guddoomiyaha Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, halka ku-xigeen loo doortay Maxamed Cabdi Waare oo ah hogaamiyaha maamulka HirShabeelle.
Golahan ayaa la sheegay inuu ka shaqayn doono danaha maamullada oo ay bar-bar socoto dib u heshiisiin bulsho taasoo la xusay in lagu gaari doono deganaan iyo xasilooni dhab ah.
Qoraalka maamullada ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda dhexe looga baahanyahay inay la timaado ajande siyaasadeed oo ku salaysan isu soo dhawaansho maadama maamullada ay saldhig u yihiin aas-aaska dowladda dhexe islamarkaana gacanta ku hayaan 90% baaxadda dhulka Soomaaliya.
Khilaafka siyaasadeed ee iminka ka jira dalka ayaa war-murtiyeedkaas lagusoo hadal qaaday, waxayna tilmaameen in dowladda Federaalka looga baahanyahay inay wada-tashi maamullada kala samayso go’aamada masiiriga ah ee taabanaya danahooda, islamarkaana khilaafkaadka ka dhasha tallaabooyinka ay qaado lagu xalliyo sida ay ku jirto maslaxadda shacabka Soomaaliyeed.
Xaaladda siyaasadeed ee maamulka Galmudug ayaa shirkaas lagusoo hadal qaaday iyadoo war-murtiyeedka lagu sheegay in maamulladu isku raaceen in khilaafkaas lagu dhammeeyo wada-hadal islamarkaana farogalinta laga daayo Galmudug oo wixii hadda ka dhex taagan looga dambeeyo hogaankooda. Waxay sidoo kale ku baaqeen in la dar-dar galiyo wada-hadalka u dhaxeeya Galmudug iyo Ahlu Sunna.
Maamullada Soomaaliya ayaa sidoo kale walaac ka muujiyay hannaanka Federaalka dalka, waxayna tilmaameen in dowladda dhexe ay wado qorshayaal iyo ku talogallo lagu wiiqayo hannaankaas taasoo ay ugu soo horayso qaabka wax qaybsiga khayraadka dalka oo sida ay hadalka u dhigeen ilaa hadda laga hayn fikir midaysan.
Sidoo kale dowlad goboleedyadu waxay hakiyeen dhammaan howlihii ay lawadeen dowladda dhexe gaar ahaan xeerarka dib u eegista dastuurka Soomaaliya, si fursad loo siiyo in go’aan kama dambays ah laga gaaro qaybsiga kharaadka dalka iyo wadaaga howlaha fulineed ee dowladda dhexe iyo maamullada.
Golaha oo war-murtiyeedkooda uga hadlayay arrimaha doorashada 2020, Kaalmada laga helo Caalamka, amniga iyo baaqyo ay u jeediyeen dowladda dhexe ayaa sheegay in khilaafka siyaasadeed ee iminka ka jira dalka uu sabab u noqday inuu wiiqmo dedaaladii ka dhanka ah kooxaha nabad diidka ah, iyagoo sheegay in loo baahanyahay qorshe amni.
BOOSAASO, Puntland- Madaxweynaha Dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, ayaa hadda ku sugan garoonka diyaaradaha xarunta ganacsiga ee Boosaaso isagoo kusii jeeda magaalada Kismayo, halkaasoo shir ay ku yeelan doonaan Madaxda maamul goboleedyada dalka.
​Maandooriye lagu qabtay magaalada Bosaso [Sawirro]
Puntland 10.09.2017. 14:14
​Somalia: Madaxweyne Farmaajo oo furaya Kalfadhiga labaad ee golaha Aqalk Sare
Soomaliya 12.07.2017. 11:38
​Puntland oo wada Qorshe ka dhan ah ururka Takfiir
Puntland 15.09.2017. 14:37
Duufaanta Irma oo gaartay dalka Kuba
Caalamka 09.09.2017. 11:33